आजदेखि देशैभर लकडाउन : के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ? - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS आजदेखि देशैभर लकडाउन : के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ?
आजदेखि देशैभर लकडाउन : के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ?
काठमाडौं, ११ चैत । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले एक साताका लागि ‘लकडाउन’ गरेको छ । सरकारले आज (मंगलबार) बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि मुलुकभर लकडाउन गरेको हो ।
लकडाउन भनेको ‘कर्फ्यु’ लगाएजस्तै असामान्य अवस्था हो । तर ‘कर्फ्यु’मा भन्दा केही लचकता हुन्छ । आजदेखि अत्यावश्यक- औषधि उपचार, खाद्यवस्तु खरिदजस्ता काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैनन् ।
फ्रान्सबाट आएकी १९ वर्षीया एक नेपाली युवतीमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि सरकारले देशलाई पूर्ण रुपमा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो । लकडाउन अवधिभर सर्वसाधारण घरबाहिर निस्कन पाउने छैनन् ।
सुरक्षा निकायबाट प्रयोग हुने वायुयान र तोकिएका अन्य उडानबाहेक सबै आन्तरिक उडान पनि एक साताकाे लागि बन्दा हुने छन् । अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै सवारी पनि बन्द हुनेछन् । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक, निजी र यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगााइएकाे छ ।
अनुमति प्राप्त सवारी साधन, सुरक्षा निकाय, प्रेसका गाडी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण ढुवानी, उत्पादनसँग सम्बन्धित सेवा र कार्यालय भने बन्द हुने छैनन् ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको ‘कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ को सोमबार बसेको बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै देशैभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आदेशको पालना नगरे के हुन्छ ?
उच्चस्तरीय समितिद्वारा जारी आदेशको पालना नगर्नेलाई कारबाही हुनेछ । आदेशलाई अपहेलना गर्नेलाई १ महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँसम्म हुनेछ । दुवै सजाय पनि हुन सक्ने छ । उच्चस्तरीय समितिद्वारा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई तोकिएको छ ।
संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ को उपदफा- २ मा भनिएकाे छ- ‘यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल राज्यका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सोको लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने ।’
यस्ता छन् निर्णयहरु :-